Home » News & Events » अाफन्तलाई जापान घुम्न बाेलाउन यसो गर्नुस्
अाफन्तलाई जापान घुम्न बाेलाउन यसो गर्नुस्
तपाई जापानमा हुनुहुन्छ र नेपालबाट आफ्नो बाबाआमा, छोराछोरी अथवा आफन्तलाई जापान घुम्न बोलाउन चाहनुहुन्छ ? जिन्दगीमा जापान आएर काम गर्नुभएको छ भने आफूले काम गरेको ठाउँ आफ्नो जन्मदिने बाबाआमालाई देखाउन घुमाउन कुन छोराछोरीलाई मन नहोला र ? आफूले काम गरेको र सबैले ओहो भनेको विकास र प्रविधिले चरमचुली चुमेको देश जापानमा आफ्नो छोराछोरीलाई घुमाउन देखाउन कसलाई मन नहुँदो हो र ? तर मनमा भएर मात्रै पनि भएन । जापान सरकारले भिसा दिनेनदिने आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यसको लागि तपाइँको तर्फबाट तपाइँले केही प्रक्रिया भने अवश्य पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जापान बोलाउनको लागि तपाइँले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने तयारी पहिलो नम्बरमा जापान बोलान चाहेको आफन्तको पासपोर्टमा लेखिए अनुसारको नाम अनुसार केही फारम भर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तैः इन्भिटेशन लेटर जसमा तपाइँले जापान बोलाउन चाहनुभएको व्यक्तिको नाम, ठेगाना र पेशा अनि तपाइँसँगको सम्बन्ध खुलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी उक्त निवेदनमा तपाइँको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर आदि लेख्नुपर्ने हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको ग्यारेन्टर लेटर हो जसमा तपाइँको विवरण र आउने व्यक्तिको लागि म जिम्मेवार छु भन्ने विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा तपाइँको इन्कान लगाउनुपर्ने हुन्छ । यसपछाडि तपाइँले जापान आउने व्यक्ति एक वा सो भन्दा बढी व्यक्ति भएको अवस्थामा सबैको नाम र विवरण लेख्नपर्ने हुन्छ । थप एक अर्को पेपर भनेको जापान घुम्न आउनेको आउने र फर्कने दिन सहित कहाँ बस्ने, जापानको कुन–कुन ठाउँ घुम्ने भन्ने कुराहरु लेख्न पर्ने हुन्छ । यही मुख्य चार पेपरसहित तपाइँले अन्य पेपरहरु पनि समावेश गर्नुपर्नेहुन्छ ।
जस्तो कि तपाइँ ग्यारेन्टर भएपछि घुम्न आउने व्यक्तिको लागि लाग्ने लागत यथेष्ट तपाइँसँग भएको प्रमाणित गर्ने कागजान भनेको तपाइँको बैंक व्यालेन्स हो । बैंकबाट बैंकव्यालेन्स सर्टिफिकेट निकाल्नुहोस । त्यसैगरी तपाइँको जापानको ठेगाना प्रमाणित गर्ने भनेको जापानको तपाइँ बस्नुभएको वडा कार्यालयले उपलब्ध गराउने जसलाई जापानीमा ज्यूमिनह्यो भनिन्छ उक्त कागज ३०० येन तिरेपछि वडा कार्यालयबाट निकाल्न पाउनुहुनेछ । यसको ओरजिनल डकुमेन्ट नै तपाइँले अन्य कागजपत्रसँगै नेपाल पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी कतिपय अवस्थामा तपाइँको तलब प्रमाणित गर्नको लागि जसलाई जापानीमा खाजेई स्योमोइस्यो भनिन्छ कतिपय अवस्थामा नोजेई पेपर थप ३००÷३०० येन तिरेर निकालेर समावेश गर्न सक्नुहुनेछ । तपाइँ कम्पनीमा काम गर्ने हुनुहुन्छ भने त्यो प्रमाणित गर्ने कागजात जसलाई जापानीमा जाईस्योकुस्योमेईस्यो भनिन्छ । कम्पनीको छाप र कम्पनीको सम्बन्धित व्यक्तिको सही अथवा इन्कान लगाइएको पेपर पनि तपाइँले सँगै नेपाल पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैगरी तपाइँको पासपोर्टको फोटोकपी, रेसिडेन्स कार्ड अनि जापान बोलाउन चाहने व्यक्तिसँगको नाताप्रमाणित पनि राख्न पर्ने हुन्छ । फारम भर्दा तपाइँले सम्पूर्ण विवरणहरु भर्नुभएपछि ग्यारेन्टर पेपर र इन्भाइटेशन पेपरमा तपाइँको इन्कान लगाउन नभुल्नुहोस् । त्यसो त जापान घुम्न आउने व्यक्ति साधारण घुम्न मात्र नभई अलिकति विस्तृतमा के कति कारणले कसलाई जापान घुम्न बोलाउँदै हुनुहुन्छ त्यो पनि लेख्नुपर्ने ठाउँ हुन्छ त्यसमा बुझिने तरिकाले तपाइँले घुम्न बोलाउन चाहनुभएको कारण खुलाउनुपर्ने हुन्छ । यतिभएपछि तपाइँले तयारी गर्नुभएको सम्पूर्ण कागजपत्रहरु नेपाल पठाइदिनुभयो भने नेपालस्थित जापानी एम्बेसीमा गएर तपाइँको आफन्तले भिसाको लागि एउटा फारम भरेर आवेदन गर्न सक्नुहुनेछ । त्यसो त नेपालमा हुनुभएको तपाइँको बाबाआमा अथवा आफन्तले नेपालमा भर्नुपर्ने फारम भर्न नसक्नुभएको अवस्थामा तपाइँ आफैले जापानबाट नै फारम रेडी बनाएर पठाउन सक्नुहुनेछ । नेपालमा सम्बन्धित व्यक्तिले सही गरेर बुझाउन सक्नुहुनेछ । आवश्यक सम्पूर्ण डकुमेन्टहरु तपाइँ इन्टरनेटको सेवा छ भने जहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ ।
माथिका डकुमेन्टहरु जुटाउन तपाइँलाई समस्या परेको खण्डमा जापानमा भएका यस्तै डकुमेन्टसँग सम्बन्धित काम गर्ने नेपाली कम्पनीहरुमार्फत पनि काम लगाउन सक्नुहुनेछ ।